Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Västra Götalands län / Mölndal
Mölndal waxeey taajir ka tahay dabiicad iyo dhaqan, waxeey lee dahay adeegyo iyo xariir sii fiican uu dhisan. Waxaa usii dheer soo bandhigid madadaalo iyo ganacsi. Mölndal waxaa laga helaa in kasto oo loogu tala galay da' kasto.
146 kiilomitir oo laba jibaaran
Göteborg 10 kiilomitir
Borås 65 kiilomitir
Varberg 68 kiilomitir
Jönköping 148 kiilomitir
Köpenhamn 308 kiilomitir
Tuulada Kvarbyn xilliga habeenka dhaqanka.
Dhawanaanshaha tooska ee Mölndal la lee dahay degmda Göteborg, waxeey taasi oo kale keeneeysaa fursad hoowlo laga heli karo lee magaalo weeyn.
"Shirkada ugu weeyn ee guriyaha waa Mölndalsbostäder iyo Förbo. Mölndalsböster waxeey ku xiran tahay Boplats Göteborg oo ka dalaal ah guriyaasha ka banaanaado in badan oo ka mid degmooyin ku hareero Göteborg. Sideeda kale Mölndal mal leh xafiis dalaal ee gaar ah. Adiga ayaa si gaar ah uu la xariireeysid milkiyaasha guriyada iyo guri kireeyaha si aad uga ogaato habka loo istaago safkood. Cinwaanada waxad ka heleeysaa Eniro."
Hel shirkadaha guryaha iyo guryaha Boplats Göteborg Mölndalsbostäder Förbo
Agagaarka bartamaha Mölndal waxaa ku yaalo xafiiska bulshada iyo xafiiska shaqada. Si aad xariir shakhsiyeed ula yeelato sanduuqa ceeymiska iyo xafiiska hey'adda canshuraha waxaad tagtaa Göteborg. Mölndal waxaa ku yaalo labadaba jiheeynta-qaxootiga/saaxiib luqaad iyo biibito luqadeed oo ku caawiyo in eey kulmaan iswiidhishka iyo ajnabiga cusub iyo qaxootiga.
Mölndal waxaa ku yaalo isbitaalka Mölndal oo ah qeeyb ka mid ah qeeybo daryeelo ee kala duwan oo ka tirsan Isbitaalka jaamcadeed ee Sahlgrenska (SU). SU waa isbitaalka gobolka ayuu yahay dad badan oo degan Göteborg, waxeeyna aqoon-xirfad uu lee yihiin in ee sameeyaan daryeelada badankood ee ka tirsan daaweeynta iyo nuuca dimirka. Sido kale SU waxaa ku tirsan isbitaalka caruurta iyo dhalinyara Boqorada Silvias. Daryeel degdeg markii ee ku saabsan tahay waxaa tageeysa qeeybta ka mid ah SU oo aad adiga uga baahida uga qabto.
Sido kale Mölndal waxeey lee dahay soo bandhig weeyn ee qeeybaaha ku jiro daryeelka guud ee gobolka Västra Göteland – Närhälsan. Gal bagooda, ka raadsana daryeelka saxda. Sido kale waxaa kjiro ruggag caafimaad oo madaxbanaan. Daryeelka ilkaha waxuu jiraa nuuc daryeelka ilkaha ee dadweeynaha ah iyo qabilaado madaxbanaan oo aad ka heli karto eniro.se.
Iskaa u bilaabaya shirkad. Samfalayaasha Mölndal
Shaqooyinka ka banaan gudaha Mölndal